अनिताको सानी भाइरल छोरीको यसरी टेलिचलचित्रमा खेल्ने सपना पूरा , अनिताको अप्रेसन हुने भयो चाहियो यति धेरै पैसा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
July 23, 2021 AdminLeaveaComment on अनिताको सानी भाइरल छोरीको यसरी टेलिचलचित्रमा खेल्ने सपना पूरा , अनिताको अप्रेसन हुने भयो चाहियो यति धेरै पैसा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
कुनै समय अनिताको शरीरको तौल घटेर २७ किलोसम्म पुगेको थियो । तर अहिले अनिता निकै मोटाएकी छिन । अहिले उनको तौल बढेर ५५ किलो पुगेको छ । अ`प्रेसन फे`ल भईसकेपछि निकै नि दु`खद समयबाट गुज्रिरहेको अनिता परिवार अहिले भने सामान्य खुसि र अधिक्तम दु`खि नैछ खुसि यो मानेमाकि अनिता हिड्न सक्ने सम्म भइन अनि दुख चहि उनको उपचार पै`सा अ`भावले गर्दा रोकिएको छ ।
भ`गवान् जस्ता श्रिमान पहिलोपटक नै थियो यसरी रो`एको ,अनिताको सु-स्वास्थ्यका लागि उनले आफ्ना आ`शुहरुलाई लुकाउनै सकेका थिएनन् । पछिल्लो समय अनिता खड्काको स्वास्थमा एकदमै क्रमिक सुधार देखिएको छ । अस्पतालमा अनिताको राम्रो हेरचाह र स्याहारसुसार गरेर आमाजु दिदी बसेकि छिन्।
सम्पूर्ण मानव सेवा समाज परिवार र ठूलो मनकि धनी ममतालाई अनिता परिवारले स-धन्यवाद दिएको छ । साथै अनिताको हातमा पत्रिका दिएर उनलाई पढाउने प्रयत्न गरेको र अनिताले पढ्न खोजेको भिडियो समेत अहिले सामाजिक संजालभरि निकै भाइरल छ । अहिले अनिताको स्वास्थ सुधार देखिएपनि पुर्णता अप्रेसन गर्नुपर्ने भएसगै फेरि अनिता परिवारलाई अहिले ठूलो धनराशिको एकदमै जरुरत छ ।
सबै नेपाली देश बिदेशबाट सहयोग भएसगै उनको त्यो दयनिय अवस्थाबाट एकदमै निखारिएको अवस्थासम्म आइपुगिएको हो । उता अनिताको छोरी पछिल्लो समय एकदमै भाइरल छिन् उनको बोल्ने शैलिको जो कोहि हामी प्रशंसक हौ । अहिले ती ४ बर्षिय सानि नानिले `भुन्टि´ नामक टेलिचलचित्रमा समेत आफ्नो दमदार भुमिका पस्किएकि छिन् । हेर्नुहोस् भिडियो सामाग्रीः